Sei kudonhedza: nzwisisa iyo pfungwa uye maitiro | ECommerce nhau
Mukati mee-commerce, kune nzira dzakawanda dzekutengesa zvigadzirwa. Chakajairika, uye icho chinogara chichiuya mupfungwa, ndechekuti uve nedura diki pamba, kana mune yemuno, patinowana zvigadzirwa zvinotengwa kwatiri online nenzira yekuti, kana vaisa odha, tinogona kuva nechitoro chekutumira. Asi kune imwezve nzira, yakachipa uye yakapusa. Iwe unoziva here kudonhedza?
Tevere tinoda kukuratidza chii kudonhedza chii, ndezvipi zvakanakira nekuipira, mhando dziripo uye maitiro ekudonhedza nyore. Totanga here?
1 Chii chinonzi kudonha?
2 Izvo zvakanaka nezvakaipa zvekudonhedza
2.1 Mhando dzekudonhedza
3 Sei kudonha
3.1 Sarudza chigadzirwa chaunoda kuzvipira kwauri
3.2 Ongorora makwikwi
3.3 Sarudza mutengesi kudonhedza
3.4 Gadzira yako inodonhedza chitoro
Chii chinonzi kudonha?
Kudonhedza iri hunyanzvi hwakavakirwa pane iro bhizinesi repamhepo risingade kuve nesheya yezvigadzirwa. Kwete izvozvo chete, asi newewo haufanire kunge uine nzvimbo yepanyama yekuchengetera zvinhu uye haufanire kutombonetseka nekutumira zvigadzirwa, nekuti ndizvo zvinochengetwa nevamwe.
Mune mamwe mazwi, Iyi inzira yekuve nechitoro chepamhepo asi panowanikwa chikamu chekutengesa chinoitwa neimwe kambani yekunze kuti ine nzira yekutumira vatengi izvo zvavanenge varaira kuchinjana ne "kunyoreswa" pane yako chikamu kutengesa zvigadzirwa zvavanazvo.
Iri bhizinesi mukana rine mabhenefiti mazhinji kune muzvinabhizimusi, kunyanya kana iwe uri wekutanga mubhizimusi repamhepo uye usingade kuisa mari yakawandisa. Asi zvakare ine akati wandei ezasi ezasi. Tinovaziva.
Izvo zvakanaka nezvakaipa zvekudonhedza
Kana iwe watove kuverenga zvakawanda nezve kudonhedza, iwe unogona kuziva zvakanaka nezvakaipa nezve iyi fomu yebhizinesi. Chimwe chezvinhu zvakanaka hapana mubvunzo chiri kusafanirwa kuita mari hombe kutsvaga nzvimbo yekuchengetera zvigadzirwa kana kuve nekutarisira zvakatumirwa, nekuti izvo zvinoitwa nevamwe. Kutumira kunovimbiswa mumaawa makumi maviri nemana nemasere nemasere mune yakawanda kesi uye une masimba ekuziva kuti mangani maodha akaiswa uye kuti uchawana marii.
Asi, mukutsinhana nebasa iro, uchafanira kubhadhara muripo wemwedzi wega, izvo zvisingawanzo kunge zvakachipa sekufunga kwako. Kune izvi isu tinofanirwa kuwedzera kuti mitengo yezvigadzirwa haina kukwikwidza zvakanyanya, nekuda kwekuti ivo vanotengeswa zvakadhura kupfuura mune zvimwe zvitoro. Uye kazhinji iwe haugone kumisikidza iwo mitengo, saka hautambe nehunyengeri uhu paunenge uchipa zvinopihwa (iwe unofanirwa kutevedzera izvo zvakasimbiswa mukudonhedza).
Izvo zvakakosha kuyera zvayakanakira nezvayakaipira zvekudonhedza kuti uite sarudzo kwayo. Asi kana iwe uchida kuenderera mberi, isu ikozvino tinokuudza iwe mhando dzekudonhedza dziripo.
Unoziva chii kune maviri marudzi ekudonhedza? Icho chinhu icho vashoma vanoziva uye vasingawani kusvikira vatanga kuongorora. Asi kazhinji, une mhando mbiri:
Navarevereri, ayo ari makambani kwaanokupa iwe, kwete chete chigadzirwa chimwe, asi akawanda, uye mazhinji mabrandi, kuti iwe ugone kugadzira chitoro chine hombe katarogu yevatengi vako. Dambudziko rega nderekuti haubate mugadziri wacho, asi mumwe munhu ndiye anopindirana pakati pezviviri.
Pasina vamiriri. Mune ino kesi, kuenda kune "sosi", kune iyo kambani inoona nezve kuita kuti zvigadzirwa izvi zvitengese muchitoro chako (kutarisira kwekupedzisira kutengesa maitiro (chigadzirwa kutumira)).
Kusarudza imwe kana imwe kunobva zvakanyanya pane izvo zvaunoda kutengesa muchitoro chako chepamhepo uye nezvaunoda kushandisa, nekuti mitengo yacho ichave yakasiyana.
Kana mushure mezvose zvatakakuudza, iwe wakatsunga kuzviedza, ndiyo nguva yekuti iwe uzive kusiira pasi. Zviri nyore, asi panguva imwechete iwe unofanirwa kufunga nezve zvimwe zvinhu zvinogona kukanganisa bhizinesi rako.
Sarudza chigadzirwa chaunoda kuzvipira kwauri
Mune ino kesi haufanire kufunga zvakawanda, kubvira Paunoona vatengesi vanopa kudonhedza pasi, unofanirwa kutora danho zvichibva pane zviripo: matoyi erotic, zvipfeko, zvigadzirwa zvetekinoroji ...
Kurudziro yedu ndeyekuti iwe uongorore mafambiro, ezvaunonyanya kufarira, uye kuti usarudze izvo zvigadzirwa zvauchazonyatsotengesa.
Hongu, hazvidziviriki; Unofanirwa kuziva waunokwikwidza naye uye nezvavanoita kuti uone kuti ungavakunda sei uye nokudaro voita kuti vatengi vavo vave vako.
Nokuda kweizvi edza kuona yavo yemagariro midhiya, vatengi ongororo, SEO, peji kumisikidza, nezvimwe.
Zvese izvi zvinokubatsira iwe kuona kuti vanobatana sei nevatengi. Izvo hazvisi zvekuteedzera ivo, asi nezve kugadzirisa izvo.
Sarudza mutengesi kudonhedza
Paunenge iwe uchiziva icho chigadzirwa, Iwe haugone kuenda kune wekutanga mupi waunowana. Iwe unofanirwa kutarisa akati wandei kuti uzive mamiriro avanokupa: nguva dzekutumira, mafomu ekunyorera, mwero, nezvimwe. Zvese izvo zvinokanganisa sarudzo yako.
Muchokwadi, vazhinji zvavanoita kuisa odha kuti vaone kuti maitiro angave akaita sei kune mutengi.
Gadzira yako inodonhedza chitoro
Izvi zvinogona kuve nyore, kunyanya kana wako anodonhedza mupi achikubatsira. Kune izvi, tinokurudzira kuti iwe uve rako rako rezita zita uye gadzira rako repamhepo chitoro mariri. Vazhinji vanoshandisa mapuratifomu senge Shopify (imwe yeanonyanya kuzivikanwa uye akazara kwazvo pamusika).
Vatengesi vanozove nebasa rekutumira izvo zvigadzirwa zvaunotengesa. Asi iwe uchafanirwa kuzvipira iwe zvizere kune yekutengesa zano. Ehe, iwe unofanirwa kunatsiridza kumira kwako, SEO, hukama hwevatengi ... Izvo zvigadzirwa hazvisi kuzozvitengesa ivo pachavo; iwe unofanirwa kuvafambisa uye iwe chete ndiwe uchazviita.
Paunonyanya kutengesa, unowedzera kuita purofiti. Uye zvakare, chako chekutanga chinangwa chinofanirwa kunge chiri chekuvhara mari yekudonhedza iwe yaunobhadhara nekutengesa kwemwedzi. Kana iwe ukazadzisa izvo, zvishoma nezvishoma iwe uchakwira uye, hongu, iwe uchawana mabhenefiti
Chaizvoizvo Kudonhedza kuri nyore, uye mabhizinesi mazhinji ari kubheja pazviri kunyangwe paine zvipingaidzo zvetsika iyi. Kunyangwe paine kukwikwidzana kuri kuwanda mukati mayo, inogona kunge iri nzira yekupinda mukutengesa zvemagetsi pasina kuisa mari yakawandisa uye, kana iwe uchinge waona maitiro acho uye kana zvichikosha, pedzisira wazviparadzanisa iwe nevaya vanopa kuti uzviite iwe .
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Sei kudonha